Kutholakale uhlobo olusha lokuhlaselwa kwe-HTTP Cela Ukushushumbisa | Kusuka kuLinux
I-Los web systems lapho i-frontend yemukela ukuxhumana nge-HTTP / 2 bese ubadlulisela emuva nge-HTTP / 1.1 hkuvezwe uhlobo olusha lokuhlaselwa kwe- "HTTP Cela Ukushushumbisa", Ivumela ngokuthumela izicelo zamakhasimende ezenzelwe ngokukhethekile, ukuhlukanisa kokuqukethwe kwezicelo zabanye abasebenzisi ezicutshungulwe ngokugeleza okufanayo phakathi kwe-frontend ne-backend.
Umbhali wocwaningo ikhombise ukuthi kungenzeka ukuhlasela iNetflix, iVerizon, iBitbucket, iNetlify CDN nezinhlelo ze-Atlassian, futhi wathola ama- $ 56.000 ezinhlelweni zomvuzo wokukhomba ukuba sengozini. Inkinga iphinde yaqinisekiswa kumikhiqizo yamaF5 Networks.
Inkinga kuthinta kancane i-mod_proxy kuseva ye-Apache http (CVE-2021-33193), ukulungiswa okulindelwe kunguqulo 2.4.49 (onjiniyela baziswa ngenkinga ekuqaleni kukaMeyi futhi bathola izinyanga ezi-3 zokuyilungisa). Ku-nginx, ikhono lokucacisa ngasikhathi sinye izihloko ze- "Content-Length" ne- "Transfer-Encoding" livinjwe enguqulweni edlule (1.21.1).
Isimiso sokusebenza kwendlela entsha yezicelo ezifanayo kuthrafikhi kuyafana nokuba sengozini okutholwe ngumcwaningi ofanayo eminyakeni emibili edlule, kepha kukhawulelwe ezinhlangothini ezamukela izicelo ngaphezulu kwe-HTTP / 1.1.
Ukuhlaselwa okudala kwe- "HTTP Isicelo Sokushushumbisa" bekususelwa eqinisweni lokuthi izingxenyeni ezingasemuva nezingemuva zihumusha ukusetshenziswa kwamaheda we-HTTP "Okuqukethwe-Ubude" ngokuhlukile (kunquma usayizi ophelele wedatha ekuso isicelo) kanye ne- "Transfer-Encoding: chunked" ( ikuvumela ukuthi udlulise idatha kuma-chunks) ...
Isibonelo, uma i-interface isekela kuphela i- "Content-Length" kodwa inganaki i- "Transfer-Encoding: fragmented", umhlaseli angathumela isicelo esiqukethe izihloko "Content-Length" ne- "Transfer-Encoding: fragmented", kodwa ubukhulu zu "Ubude bokuqukethwe" abufani nosayizi wentambo ehlanganisiwe. Kulokhu, i-frontend izocubungula iphinde iqondise kabusha isicelo ngokuya nge- "Ubude bokuqukethwe", futhi i-backend izolinda ukuthi ibhulokhi iqede ngokususelwa ku- "Transfer encoding: chunked".
Ngokungafani nombhalo olandelwayo we-HTTP / 1.1, odluliswe ezingeni lomugqa, I-HTTP / 2 iyi-protocol kanambambili futhi ilawula amabhulokhi idatha yosayizi onqunyelwe ngaphambili. Noma kunjalo, i-HTTP / 2 sebenzisa izihloko zamanga ezihambelana namakhanda ajwayelekile we-HTTP. Lapho usebenzisana ne-backend usebenzisa umthetho olandelwayo we-HTTP / 1.1, i-frontend ihumusha lezi zihloko zamanga ngezihloko ezifanayo ze-HTTP / 1.1 HTTP. Inkinga ukuthi i-backend yenza izinqumo ngokuhlaziywa kokudluliswa ngokuya ngezihloko ze-HTTP ezibekwe ngaphambili, ngaphandle kokwazi amapharamitha wesicelo sokuqala.
Ngisho nangendlela yama-pseudo-headers, amanani "Ubude bokuqukethwe" ne- "transfer-encoding" zingasakazwa, yize zingasetshenziswanga ku-HTTP / 2, ngoba ubukhulu bayo yonke idatha bunqunywa enkambeni ehlukile. Kodwa-ke, lapho kuguqulwa isicelo se-HTTP / 2 ku-HTTP / 1.1, lezi zihloko ziyadlula futhi zingadida emuva.
Kunezinketho ezimbili zokuhlasela okuyinhloko: i-H2.TE ne-H2.CL, lapho i-backend ikhohliswa ukufaka ikhodi engalungile noma inani lobude bokuqukethwe elingahambelani nosayizi wangempela womzimba wesicelo otholwe yi-frontend nge-HTTP / 2 Protocol.
Njengesibonelo sokuhlaselwa kwe-H2.CL, usayizi ongalungile ucacisiwe kusihloko-mbumbulu ubude bokuqukethwe lapho ufaka isicelo I-HTTP / 2 iye kuNetflix. Lesi sicelo siholela ekwengezweni kwesihloko Ubude bokuqukethwe be-HTTP efanayo lapho ufinyelela i-backend nge-HTTP / 1.1, kepha kusukela ngosayizi ku- Ubude bokuqukethwe ingaphansi kokungokoqobo, ingxenye yedatha kulayini icutshungulwa njengokuqala kwesicelo esilandelayo.
Amathuluzi okuhlasela aseveziwe engezwa ku-Toolkit yeBurp futhi ayatholakala njengesandiso se-Turbo Intruder. Ama-proxies weWebhu, ama-balancers wokulayisha, ama-accelerator wewebhu, amasistimu wokulethwa kokuqukethwe, nokunye ukucushwa lapho izicelo ziqondiswa kabusha kusikimu se-frontend-backend zingaba senkingeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » Bathole uhlobo olusha lokuhlaselwa kwe-HTTP Cela Ukushushumbisa